Custom Message အလန်းလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Custom Message အလန်းလေးများ
Posted by ရွှေဘိုသား on Aug 3, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 8 comments
1.၂ယောက်ပျော်ရမယ့် အဖြစ်ကို မရနိင်ရင် ၂ယောက်ငိုရမယ့်အဖြစ်ကိုတော့ မလုပ်ချင်ဘူး …နင်ပျော်ပါ…ငါငိုမယ်ချစ်သူ
30. I say. you say.နှစ်ယောက်ဆေးတော့ ပုဂံတွေ ပြောင်ရော။ I see. you see. နှစ်ယောက်စီးတော့ ဒန်းကျိုးတယ်။ I no. you no. နှစ်ယောက်နိုးတော့ အိပ်ရေးပျက်တာပေါ့။
31. မင်းကိုတွေ့ချင်ရင် မင်းဓာတ်ပုံထုတ်ကြည့်တယ် မင်းကိုလွမ်းရင် မင်းအကြောင်းစဉ်းစားတယ် မင်းအသံကြားချင်ရင် ခွေးကိုခဲနဲ့ပေါက်တယ်…
32. ဝ မရှိပဲ ဝိ မလုပ်နဲ့… ဝ ဝ စား.. ဝေးဝေးနေ.. ဝါးတားတားနဲ့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုတ်ပြီး ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့.. .. ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး… ဝိုက်ထည့်လိုက်လို့…. ဝ ရုန်းသုံးကား ဖြစ်သွားမယ်
33. ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း ၂၃ … ဟိုချေးဒီချေး ၂၄ … သတ်သတ်လွတ်စား ၂၅ … ရေသောက်ဗိုက်မှောက် ၂၆ … အိုးမှောက်ခွက်သွန် ၂၇ … အမေ့အလစ် ၂၈ … အိမ်ကပြန်ခိုး ၂၉ … ပေါင်ဟယ်ဆုံးဟယ် ရက် ၃၀ … ဟိုကစ်ဒီကစ် ၃၁……
34. ငါချစ်လို့ နင်စိတ်ညစ်မယ်ဆို.. နင်မသိအောင်ငါချစ်မှာပေါ့ … မုန်းဖို့တော့မခိုင်းနဲ့လေ……… မေ့ဖို့ဆို ပိုဝေးတယ် …… စဉ်းစားကြည့်ပါလား…. ဘယ်တရားမလဲ.. ငါ့လဲငါ့ခံစားချက်နဲ့ငါပဲဟာ
35. ♥ ♥ငါ ချစ်သလောက် မချစ်လဲ နေပါ♥ ♥ငါ လွမ်းသလောက် မလွမ်းလဲ ၇ပါတယ် ♥ ♥မင်း ထားခဲ့ မယ် ဆိုလဲ ♥ ♥ငါကျေနပ်ပါတယ် ♥ ♥ဒါပေ့မယ် တိုက်ဆိုင် မှုလေး တွေ၇ှိ၇င်တော့ သတိ၇ပေးပါဟာ♥ ♥…ငါတောင်းပန်ပါတယ်
36. လာပါအချစ်ရယ်….. ဖဲသွားရိုက်မယ်… ဘောပွဲလောင်းမယ်… ၂လုံးထီထိုးမယ် ကြည်နူးဖွယ်… ထီကြီးပေါက်ဖို့ ရည်စူးရွယ်ကာ ဘုရားကိုတက်….. ကန်ဘောင်မှာ တူတူထိုင်ကာ ၃လုံးကိုတွက်…… Oh Yes, Oh Yes.
37. နှလုံးသားထဲ"အိမ်မြောင်"စုတ်ထိုးသံကြားကတည်းက ကိုယ်စိတ်တွေ"တောက်တဲ့"ဖြစ်ချင်နေတာ…. ရင်တွေလည်း"မျောက်"ခုန်ခုန်ပြီး "ဇီးကွက်"လိုအိပ်ပျက်ညတွေနဲ့ "လဒ"မှိုင်မှိုင်နေရတဲ့အဖြစ် ချစ်လိုက်စမ်းပါ.
38. ချစ်သူဆီကအပြန်ဖိနပ် မှတ်လို့ကောက်စီးလာတာ ငါ့မာနတွေဖြစ်နေတာပဲ… တော်တော်တောင်ပါးနေပြီပဲ ရှိပါစေတော့ငါကချစ်တာကိုး………
39. Gtalk ဖွင့်တိုင်း Chat နေတယ်မထင်နဲ့ ပြန်မပြောလို့မကျေနပ်ရင် ဘလော့လိုက် ငါဘလော့ထားတဲ့လူစာရင်းက မင်းတို့မြို့ရဲ့ လ၀ကရုံးက လူစာရင်းထက်များတယ် နားလည်လား …း(
40. Gtalk ဖွင့်တိုင်း Chat နေတယ်မထင်နဲ့ နားလည်လား နားမလည်ရင် နှစ်ခါပြန်ဖတ် နှစ်ခါပြန်ဖတ်လို့မှနားမလည်ရင် ငါ့ (IQ)တော်တော်နိမ့်တာဘဲဆိုပြီး သတ်သေလိုက်..း(
41. Hay! Girl ငါဆိုတဲ့Boy က online သုံးပီး Q နေတာမဟုတ်ဘူး….မကျေနပ်ရင်ဘလော့လိုက်..ဂရုမစိုက်ဘူး…..
42. နာမည်မေးခါနီးရင် Connection က ကျပြီ….လိမ်စာမေးခါနီးရင် Connection က ကျပြီ….ဖုန်းနံပါတ်လေးပြောခါနီးရင် Connection က ကျပြီ …နင် တနေ့ဝဋ်လည်မယ် Connection….ဟင်းးး
43. ရည်းစားထားရတာဟာ Bus ကားစီးရသလိုဘဲ ထွက်သွားတဲ့ ကားကို ပြေးမလိုက်နဲ့ မောတယ် ခနစောင့် နောက် တစ်စီးလာ လိမ့်မယ်…….
44. သတိ!!!!နားရင်းအုပ်တတ်သည် ကြည့် ဟိုင်း ပါ..း(
45. ငါ့ကို ဆိုးတယ် ဆိုးတယ် နဲ့ပြောကြတယ် မဆိုးပါဘူး မယုံရင် တစ်ပတ်လောက်ပေါင်းကြည့်ပါလား အဆင်မပြေ၇င် မေမေနဲ့ တိုင်ပေါ့…:P
46. တစ်ခါ Hi ၁၀၀ ကျပ်။ နာမည်မေးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်။ လိပ်စာပါသိချင်လျှင် ၅၀၀ ကျပ်။ အသည်းကွဲ၍လာတိုင်ပင်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်။ ဟိုမေးဒီမေး ၅၀၀၀ ကျပ်။ စစနောက်ပြောင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်။ ရည်းစားစကားပြောလျှင် FREE…..
47. အသောက်ပြတ်ရင် အသက်ပျောက်သွားမှာစိုးလို့…..အသက်မပျောက်အောင် အသောက်မပြတ်ပါ…….း)
★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • •。★.★ 。* 。 ° 。 ° ˛˚˛ * Π____*。*˚ ˚ ˛ •˛•˚ */______/~＼。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛• ˚ ｜ 田田 ｜門｜ ˚
48.ကျွဲပါးစောင်းတီးတဲ့…… ဆို၇က်လိုက်တာ… ..တစ်ဖက်စောင်းနင်းစကားတွေ… မြက်လောက်မချိုတဲ့ဂီတကို မခံစားပေးနိုင်တာ ကျွဲအပြစ်ဆို၇င်……. စောင်းသမားလည်း မြက်စားကြည့်ပါလား… ဂီတလောက်ချိုမလားလို
49.အချစ်ဆိုတဲ့အရာသာ အလေးချိန်ရှိမယ်ဆိုရင် ချိန်ပြလိုက်ချင်တယ် မင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပေ့ါ
50.To Say ပြတ်ပြတ်သားသား. I am ကလေးသာသာ. So I Live ရိုးရိုးသားသား. I Have No ရည်းစား. But I am not အားအားယားယား. Because I am စာကြိုးစား. .And ဒီ Massage ဖတ်တဲ့သူများ ရည်းစား .. !!
51.အကြူဇယားတွေနဲ့ ရှုပ်နေတာလို့ ထင်နေတာလား ~~~ မင်းသိဖို့ က အကြူဇယား၊အချူဇယားဆိုတာတွေ ငါမသိဘူး ~~~ Ok ရင် Chat မယ် ~~~ မ Ok ရင် Block မယ် ~~~ သိပ်ရစ်လွန်းရင် Block List ထဲမှာထာဝရနေရမယ် ~~~ မင်းရောနေချင်လို့ လား ?
52.ငှက်တစ်ကောင်ကိုချစ်မိမှတော့ လွတ်လပ်ခြင်းကိုပါ ငါနားလည်ပေးရတော့မှာပေါ့ … ♥ ငါမချုပ်ချယ်ပါဘူး မင်းအတောင်ညောင်းရင် နားခိုအိပ်စက်တတ်တဲ့ သစ်ပင်တိုင်းပဲ ငါဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ…♥♥♥
53.ငါ့အသည်းက အက်နေတာ.နော်.. နင်လိုချင်ရင်..အနည်းဆုံးတော့. ပတ်တီးမဟုတ်ရင်တောင်… ပလာစတာလေး တော့ ယူခဲ့ဟာ…. လောလောဆယ် ကိုင်လို.ကို မရတာ.. .. ထိတာနဲ့ ကွဲမှာဆိုးလို. ငါတောင်.. ဂျောင်ထိုးထားရတယ်.. ။။။။
54.နောက်ငါရေးတဲ့ ကဗျာတိုင်းဟာ…မင်းအတွက်လို့ ရည်စူးမိရင်..ငါ့လက်ကိုအင်္ဂုလိမာလဆီအပ်ပစ်လိုက်မယ်….ငါမင်းကိုသေအောင်မုန်းတယ်
55.U See I See 2ယောက်စီးတော့ ဆိုက်ကားလေးတာပေါ့ U Say I Say 2ယောက်ဆေးတော့ ပန်းကန်ပြောင်တာပေါ့ U Known IKnown 2ယောက်နိုးတော့ သူခိုးပြေးတာပေါ့ U Chat ICHat 2ယောက်ချက်တော့ ထမင်း အမြန်ကျက်တာပေါ့…
56.ဟိတ် ~ ဟိုကောင်လေး ခုချက်ချင်းရပ်စမ်း!! အမယ် ~ ငါ့အသည်းကိုများ ဓားနဲ့လှီးဆော့နေသေးတယ် …. နာတော့မယ်~!! အောင်မာ .. ဘုရှိုးလာရှိုးမနေနဲ့!!! နင့်လက်ဓားရှမှာစိုးလို့ တားနေတာ ~ ဟွန့်*
56. နင်မမှားပါဘူး ငါမမှန်ခဲ့တာ နင်မလာခဲ့ပါဘူး ငါမျှော်လင့်နေမိတာပါ နင်မချစ်ခဲ့ပါဘူး ငါသာရူးမိုက်ခဲ့တာ စုတ်ပြတ်သတ်ခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေအတွက် နောက်ဆုံးအပြစ်ပိုင်ရှင်က ငါပါဟာ….!!!!
57.လွမ်းလောက်စရာ…. .အဆင့်မရှိ်ဘဲ……..မာန်တတ်ပြမနေနဲ့…….နင့်ကိုကြွေလို့……..မျက်ရည်ကျတဲ့ရည်းစားတွေထဲမှာ……….ငါမပါဘူး……..မလွမ်းဘူးနော်………ကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်တယ်… 1 Go, 2Come,3Ready,4Wait ကျေနပ်တယ်
ဟားဟား မိုက်တယ်နော် စာသားတွေကလန်းတယ်
G talk မှာအမျိုးမျိုးတင်လို့ရတာပေါ့နော် ဟီးဟီး…
နံပါတ် 57 တော.ကြိုက်သားဗျာ5welcome တောင်ပါလိုက်သေးတယ်
အကုန်လုံးသာ တင်ရရင်တော့ ဂျီတော့အကောင့်တောင် လောက်မှာမဟုတ်ဘူး….
ကြိုက်တယ်ဗျာ custom message တွေကို။
“၃၀၀ပေးပြီး ဂိမ်းဆော့ရင်တောင် ၁နာရီလောက်ပျော်ရသေးတယ်…… ငါ.နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပေးပြီး.. နင့်ကိုချစ်ခဲ့ တာာ.. 1 ရက်မှ ငါ မပျော်ရပါလားပာာ”
59. ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့…….​ ဖြူဖြူကျော်သိန်းငှားပြီး……​ ဘယ်သူကိုယ့်လောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့ သီချင်းကို.. နင့်အိမ်ရှေ့မှာ ညလုံးပေါက်ဆိုခိုင်းမယ်…
ဟိဟိ ကြိုက်လွန်းလို့ ကူးသွားပြီ